तपाईको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल – PathivaraOnline
Home > राशिफल > तपाईको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशिफल
admin December 23, 2018 राशिफल 0
आर्थिक समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको साता रहला। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल्नेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्ला। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ।
मनमा केही कौतूहल र चिन्ता रहला। लेनदेनमा निकै विचार गर्नुपर्नेछ। खानपानमा विचार पुऱ्याउनुपर्ला। विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्नेछ। घरपरिवारबाट भरपुर सहयोग प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नेछ। खेलाडीहरूका लागि साता राम्रो छ। व्यापारीहरूका लागि साता मध्यम छ।
साता उत्कृष्ट देखिएको छ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल्नेछ। घरपरिवारमा बाधा र अप्ठ्याराको समय रहन सक्नेछ। लेनदेन र कारोबारमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि बढ्नेछ। घरपरिवारबाट राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइ र कुलकुटुम्बको सहयोग प्राप्त होला।
आर्थिक समृद्धिको साता रहला। धार्मिक कार्यमा सरिक हुनुहुनेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि रहनेछ। स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुनेछ। लेनदेनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा उन्नति, प्रगति हुनेछ। व्यापार, व्यवसायमा मध्यम लाभ छ।
आर्थिक समृद्धिको साता रहेको छ। विद्या, बुद्धि बढ्ला। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। लेनदेनमा र कारोबारमा भने धेरै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। हजुरले गर्न खोज्नुभएको नयाँ काममा भने केही समस्या र अड्चन आउन सक्नेछ। मातापिता, घरपरिवार र इष्टमित्रबाट पाउने सहयोग भने भरपुर रूपमा प्राप्त हुनेछ।
जागिरेहरूका लागि साता मध्यम छ। दाम्पत्य जीवनमा केही कष्टका परिस्थितिहरू रहन सक्नेछन्। यात्रा मध्यम छ। व्यापार, व्यवसायमा लाभ छ। खानपानमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। हजुरले गर्न खोज्नुभएको नयाँ काममा अड्चन र समस्या आउने देखिन्छ। कुलकुटुम्ब र इष्टमित्रको सहयोग प्राप्त होला।
नयाँ घर, जग्गा, जमिनका योगहरू बन्नेछन्। व्यापारमा लाभको साता छ। पारिवारिक सुख, शान्ति रहला। दाम्पत्य जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि मिल्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा मान, सम्मान बढ्नेछ।
साता निकै राम्रो छ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। खानपान र स्वास्थ्यमा विचार पुऱ्याउनुपर्ला। यात्रा सुखद रहनेछ। दाम्पत्य जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नेछ। हजुरले गर्न खोज्नुभएको नयाँ काममा अड्चन र पीडा खप्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान, सम्मान बढ्ला।
आर्थिक समृद्धि मिल्ला। परिवारमा सुख, शान्ति र दाम्पत्य जीवनमा समृद्धि रहनेछ। घरपरिवारको सहयोग प्राप्त होला। लेनदेनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। व्यापार, व्यवसायमा लाभ छ। सवारी साधनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। जागिरेहरूका लागि साता मध्यम छ।
आर्थिक समृद्धिको साता रहला। घरपरिवारको सहयोग प्राप्त होला। दाम्पत्य जीवनमा समृद्धिको योग देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। यात्रा मध्यम छ। नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ। व्यापार, व्यवसायमा निकै राम्रो देखिएको छ।
विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति मिल्ला। राजनीतिक क्षेत्र मध्यम छ। खेलाडीहरूका लागि साता निकै राम्रो छ। यात्रा मध्यम छ। स्वास्थ्यमा थोरै विचार गर्नुपर्नेछ। हजुरले गर्न खोज्नुभएको नयाँ काममा अड्चन र पीडा खप्नुपर्ने देखिन्छ।
साता निकै राम्रो देखिएको छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्ला। कुलकुटुम्ब, इष्टमित्र र दाजुभाइबाट पाउने सहयोग भरपुर रूपमा प्राप्त हुनेछ। लेनदेनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। हजुरले गर्न खोज्नुभएको नयाँ काममा अप्ठ्यारा पक्षहरू रहन सक्नेछन्। स्वास्थ्यमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ।
तपाइको यो साता कति शुभ? हेर्नुहोस् असार १३ गतेदेखि असार १९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल